» प्याजको मूल्य बढेपछि उपभोक्ताले प्याज खान छाडे !
प्याजको मूल्य बढेपछि उपभोक्ताले प्याज खान छाडे !
अहिले बजारमा प्याजको मूल्य आकासिएकाे छ ।
१३ पुष २०७६, आईतवार १२:४६
अहिले बजारमा प्याजको मूल्य आकासिएकाे छ । अप्रत्यासितरूपमा प्याजको मूल्य बढेसँगै सर्वसाधारण उपभोक्ताले अहिले प्याज खान छाडेका छन् । भारतले निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएसँगै दशैँको समयपछि नेपाली बजारमा प्याजको मूल्य दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको हो । भारतबाट सहजै निर्यात हुने प्याजको निर्यातमा अहिले प्रतिबन्ध छ ।